Barnaamijyada Google | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Ka hogaamiye qaran ahaan adeegsiga tikniyoolajiyada si loo balaariyo fursadaha waxbarasho ee ardayda, waxaan ku faraxsanahay inaan la shaqeyno Google Apps ee Waxbarashada . Barnaamijyada Google ee loogu talagalay waxbarashada waxaa isticmaala kumanaan iskuulo ah iyo jaamacado adduunka oo dhan ah si looga dhigo aaladaha iskaashiga ardayda. Qalabka iskaashiga Google Apps wuxuu u suurtogelinayaa ardayda inay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan dukumiintiyada, bandhigyada iyo mashaariicda shabakadda. Google Apps waxay siisaa meel lagu keydiyo khadka tooska ah ee faylalka, iyadoo laga takhalusi doono baahiyaha ugu badan ee flash drives inta u dhexeysa guriga iyo dugsiga. Barnaamijyadani waxay sidoo kale si toos ah ugu milmaan Schoology, oo u oggolaanaya ardayda inay si elektaroonig ah u soo gudbiyaan shaqooyinka.
Xisaabaadka Google Apps ardayga
Si loo hubiyo in ardayda oo dhami helaan isla markaana loo hogaansamo sharciyada badbaadada qadka ee ilaalinaya caruurta 13 iyo wixii kayar, Degmadu waxay siin doontaa koontooyinka barnaamijyada Google ardayda fasalada K-12 Xisaabaadka ardaygu waxay ka bilaabmaan lambarka aqoonsiga ardayga oo ay ku xigto @ mtka.org (tusaale, 000012@mtka.org).
Siyaasadda Isticmaalka La Aqbali Karo
Khabiirka Warbaahinta ee dugsiga ilmahaaga, iyo sidoo kale macallimiinta fasalka, ayaa ardayda ku wargelin doona sida loo helo koontadooda, loo wadaago loona iskaashado faylasha, iyo sida loo isticmaalo xisaabaadka iyadoo la raacayo Nidaamkeena Isticmaalka La Aqbali Karo . Sanadka oo dhan, canugaaga waxaa laga yaabaa inuu qabto meeleyn lagu dhameystiray iyadoo la adeegsanayo aalado sida Google Docs iyo Google Sites oo uu ka heli doono tilmaamo macalimiinta ku saabsan aaladda Google waqtigaas. Waalidiinta sidoo kale waxaa lagu dhiirigelinayaa inay carruurta kala hadlaan anshaxa iyo nabadgelyada qadka. Tilmaamaha iyo ilaha ku saabsan caafimaadka dhijitaalka iyo fayoqabka, fadlan booqo boggeena Dijital Caafimaadka & Fayoqabka .
Caawinta helitaanka internetka
Haddii ilmahaagu uusan ka heli karin kombiyuutar iyo / ama internet guriga, fadlan la xiriir maamulaha dugsiga si aad ugala hadasho u qalmidda caawimaadda.
Helitaanka emaylku wuxuu bilaabmayaa fasalka 4
Galitaanka emaylku wuxuu bilaabmayaa fasalka afaraad. Koontooyinka emaylka ayaa looga baahan yahay qalab waxbarasho oo badan oo ku saleysan websaydhka waxayna sidoo kale u oggolaataa ardayda iyo macallimiinta inay la xiriiraan oo ay si nabadgelyo iyo qaabaysan ula shaqeeyaan fasalkooda. Qalabka barashada ee ku saleysan Webka wuxuu si bilaash ah ugu helayaa sheeko-qorista, khariidaynta fikradaha, tafatirka fiidiyowga iyo aaladaha bandhigga muuqaalka ah. Shaqaalaha degmada iyo Guddiga Dugsiga ayaa si taxaddar leh uga fiirsaday amniga qadka ee ardayda markay dejinayaan habraacyada iyo xeerarka xisaabaadka ardayda.
Ardaydu waa inay u tixgeliyaan emaylkooda dugsiga inay yihiin ballaadhinta fasalka, iyadoo la raacayo isla shuruucda ixtiraamka iyo xushmadda aan ka filayno dugsiga. Markaad ilmahaaga kala hadlayso isticmaalka la aqbali karo ee emaylka, waxaad u isticmaali kartaa isbarbardhiga shaqada dadka waaweyn iyo emayllada shaqsiyeed. Loo shaqeeyayaasha badankood waxay weydiistaan in emaylka shaqada loo isticmaalo kaliya shaqada, loo shaqeeyeyaashuna waxay fursad u leeyihiin inay arkaan oo ay xaddidaan isticmaalka emaylka si ay u hubiyaan in si habboon loo isticmaalay. Isla sidaas ayaa ku dhici doonta xisaabaadka emaylka ee dugsiga. Dhammaan e-mayllada iskuulka ayaa la keydiyaa oo dib loo heli karaa seddex sano.
Akoonnada emaylka ee dugsiga waa inay u hoggaansamaan Sharciga Ilaalinta Internetka ee Carruurta ee loo yaqaan 'CIPA'. E-mayllada ardayda waa la sifeyn doonaa, sida marinka internetka ee dugsiga loo sifeeyo, si loo hubiyo nabadgelyada ardayda ee qadka. Email kasta oo loo diro ama laga helo koontada iimaylka dugsiga (ha ahaato guri kasta, iskuul ama kombiyuutar guud ama aaladda mobilada) wuxuu maraa softiweerka shaandhaynta ee lagu baaro luqadda iyo sawirada. Cinwaanada iimaylka ardaydu waxay yeelan doonaan xaddidaad ku saabsan waxa la heli karo. Minnetonka wuxuu adeegsadaa aaladaha shaandhaynta oo aad u xoog badan wuxuuna sameeyaa dadaal kasta oo lagu joojinayo waxyaabaha aan habboonayn; si kastaba ha noqotee, tikniyoolajiyadda ayaa waligeed ‐ horumarisa. Haddii ardaygu helo emayllo aan habboonayn, waa in loo wargeliyaa qof weyn oo loo gudbiyaa qoyska.helpdesk@minnetonkaschools.org .